I-Lake By The Sea Retreat Suite Deal - I-Airbnb
I-Lake By The Sea Retreat Suite Deal
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguShay
Indawo entle yokuphola esechibini eyi-2 Bdrm. Hlala kumgangatho ojikelezileyo uze wonwabele ubuhle bendawo ekufutshane. I-Eagles, iRavens, kunye neLoons zicula echibini kodwa zimbalwa izilwanyana zasendle ezikhoyo onokuzibona. Intlanzi okanye ukuqubha kwichibi laseGarden Bay eliphakathi ngqo kwindlu yethu ngaphaya kwendlela eya eGarden Bay ekugqibeleni kwendawo yokungena. Yonwabela ubutofotofo kwibhafu yakho enamanzi ashushu yabucala ejonge ichibi. Kufuphi namanye amachibi amaninzi amahle, kunye nokufikelela elwandle kwiHarbour
Izinto ezonwabisayo zokuloba ngamanzi aselwandle zingabhukishwa ngezikhokelo zasekuhlaleni. Umzila odumileyo wehlabathi ukuya kwi-Skookumchuck Imperids uhamba ngemoto emfutshane ukuya kwi-Hwy. Iziganeko ezininzi zasekuhlaleni unyaka wonke kwindawo yePender Harbor. Yiza wonwabele ukuhlala kwakho nombuki zindwendwe wakho, u-Michele no-Michele
Indawo yaseGarden Bay yaziwa ngokuba sisithili sechibi esinamachibi amaninzi kwimizuzu eyi- yendlu yethu. Ichibi laseSakinaw, kunye nechibi eliyiRuby ngemoto emfutshane ukuya kwi-Hywy 101 . Yiza neebhayisekile zakho uze uhambe ngeenyawo, iindawo zasekuhlaleni aziyi kukuphoxa.
I-Pender Harbor golf coarse ikumgama wemizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto. Ukunyuka intaba okuninzi kwasekuhlaleni, uDaniel Mt kunye neenduli ze-Pender kwimizuzu eyi-, I-skookumchuck Imperids enembali ebuka umzila wemizuzu eyi-20 xa uhamba ngemoto. Bhukisha uhambo lokuloba ngamanzi anetyuwa kunye nomnye wabakhokeli basekuhlaleni abanamava ePender Harbors. Ungaphumla okanye uzonwabise ngendlela othanda ngayo njengoko kukho amathuba angapheliyo okuhlala kwindawo yasekuhlaleni, Yiza ubone ukuba kutheni mna nomfazi wam sicinga ngezulu lasekuhlaleni elisemhlabeni ( :
Umbuki zindwendwe ngu- Shay
Siza kuzama ukuphendula nayiphi na imibuzo yakho ngexesha elifanelekileyo